Reer Jowhar oo iska kaashanaya iska moosidda fatahaadda webiga
Dhallinyarada Jowhar ayaa bilaabay inay ka qeyb qaataan celinta iyo carro saarka biyaha daadadka uu dhaliyo webiga Shabeelle, oo dhowr jeer ooh ore khasaarooyin baaxad leg ka geystay gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dhallinyaradan ayaa xooggooda ku tabarrucaya baaldoosarrada ay ku deeqeen ganacsatada Jowhar ee carro tuurka loogu sameynayo meelaha godan ee daadadka webiga u nugul.
Inkastoo biyaha webiga ay ku wareegsan yihiin xaafadaha Jowhar, haddana waxaa ugu daran Xaafadda Hantiwadaag ee ugu weyn xaafadaha degmada Jowhar oo dhanka waqooyi iyo galbeedba ay biyuhu qarka u saaran yihiin inay kusoo fatahaan mar walbaa khatar fatahaad ay timaaddo. Waana meelaha howshacarro tuurka ay xooggeeda ka socoto, sida uu Ergo u sheegay guddoomiyaha xaafaddaas Cismaan Gaab. “
“Xaafaddan ayaan ku nool nahay, waxaan ku noolnahay xooggeenna, hantida ganacsatada ayaa halkan taalla marka ma qaxi karno, sidaas daraaddeed ayaan isku xilsaarnay inaan carro tuur ka sameyno xaafadda.” Sidaa waxaa yiri mid ka mid ah dhalinyarada ka qeyb qaadaneysay carrotuurka.
Ilaa 200 oo qoys oo xaafaddaas Hantiwadaag degganaa ayaa u barakacay deegaanno ka tirsan gobolka Jowhar, iyagoo ka cabsi qabay fatahaadda webiga. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdi Jiinow Calasow ayaa ugu baaqay dhalinyarada gobolka inay ku daydaan dhalinyaradan ayna ka qeyb qaataan u diyaar garowga iyo iska moosidda biyaha.
“Ma aha in kaalmo shisheeye la sugo, wixii aan awoodno waa inaan ka qabannaa si aysan saameyn badan u keenin khataraha fatahaadda webiga, waxaa la idinka doonayaa inaad iskiin ugu tabaabusheysataan fatahaadda.” Ayuu yiri Cabdi Jiinow.
Dhanka kale, dhallinyaradan ayaa sheegaya inaysan keligood ku filneyn ka hortagga fataahadda uu sababo webiga Shabeelle oo awooddooda ay ka weyntahay, “Biyaha heer ka hortag iyo moosid way dhaafeen, fatahaadda waa kuwo xoog leh, hadda fatahaaddii ugu dambeysay waxay baabi`isay beerihii, keliyadii ugu waaweynaa magaalada ayay soo mareen, marka lama xakameyn karo.” Sidaa waxaa yiri Maxamed Cali Yuusuf.
12kii bishan September ayuu webiga Shabeelle markale ku fatahay magaalada Jowhar, waxaana ku barakacay boqollaal qoys, sida uu xaqiijiyay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maryan Sheekh Cabdi/FM/AM